I-Newbridge Archives - IntoKildare
Isekelwe emathafeni adumile aseCurragh, iNewbridge inothe ngamasiko, amagugu, ukuyothenga nezinto ezikhangayo - ihlinzeka ngokuthile kwawo wonke umuntu. Gxila kumagugu acebile e-Kildare yamahhashi, zitike ekwelapheni okuthile okudayisa futhi ujabulele uxhaxha lwezindawo zokudlela eziwine imiklomelo.
INewbridge isemaphethelweni eCurragh Plains futhi iboshwe yiBog of Allen kanye nePollardstown Fen. Le ndawo yaziwa kakhulu ngokuzalanisa amahhashi ase-Ireland, ukuqeqeshwa nokugijima ngakho-ke akumangazi ukuthi eduze namapulazi amaningi e-stud kanye neCurragh Racecourse. Idolobhana landa ngokushesha ngemuva kokwakhiwa kweCurragh Camp ngo-19th Ikhulu leminyaka.
Idolobhana, elisosebeni loMfula i-Liffey, cishe laziwa kakhulu ngokuba yikhaya laseNewbridge Silverware abenza izinto zokusika lapha kusukela ngo-1934 futhi muva nje linesikhungo sezitolo esikhulu kunazo zonke e-Ireland - iWhitewater.
Amadolobhana athule ase-Athgarvan, Kilcullen nase-Allen aseduze kanye nenkundla yegalofu endala, iRoyal Curragh. Futhi uma ulalelisisa, i-Curragh Plains kanye ne-Hill of Allen eseduze ixoxa izinganekwane zika-St Brigid, na-Fianna kanye no-Dan Donnelly.
U-Edward Harrigan & Amadodana
Ukunikeza umkhiqizo omuhle kakhulu wasendaweni ukudala ukusonteka kokudla kwase-Ireland kwanamuhla ngezitsha ezithile zomhlaba wonke.
IMichelin yancoma isipiliyoni sokudla okunikeza ukudla okumnandi endaweni ekhululekile nejabulisayo.
Ukudla okuhle kakhulu kwaseMelika naseTex-Mex, inani elikhulu kanye nensizakalo enobungani kanye nama-cocktails namabhiya wobuciko ahambisana nomculo omnandi.
ILavender Cottage yindawo yokucasha enhle ehlelwe osebeni lomfula iLiffey. Ukufudumala, ukwamukela futhi okusebenzayo.
U-Lily O'Brien ubelokhu enesifiso sokwenza ushokoledi onisela umlomo e-Co Kildare kusukela ngo-1992.
Ibha ephilayo enkabeni yeNewbridge enezikhathi zomculo ezibukhoma nayo yonke imicimbi emikhulu yezemidlalo esikrinini esikhulu.
Isikhungo sezobuciko esinemikhakha eminingi sikhombisa imidlalo yeshashalazi, umculo, i-opera, amahlaya nobuciko bokubukwa.
Indawo yokuqala yomjaho wamahhashi oyisicaba wase-Ireland kanye nenye yezindawo eziheha kakhulu zemidlalo emhlabeni.
Okuhlangenwe nakho kweHurling
Umuzwa oyingqayizivele wamasiko ogubha umdlalo wokujikijela ngobumnandi obuningi namanye amathuba amahle ezithombe namavidiyo.
Umndeni ozimele uphethe ihhotela lezinkanyezi ezi-4 elidume ngenkonzo yalo efudumele, enobungani, neyobungcweti endaweni ethokomele, enesizotha futhi ephumuzayo.